SELECT SPECIALITYPhysicianGeneral Diabetes & EndocrinologConsultant PhysicianHaematologistChest PhysicianChest SurgeonsLiver SpecialistGi SpecialistGI SurgeonCT, Ultrasound, X-RayE.N.T SpecialistOrthopaedic SurgeonPsychiatristPathologistsGeneral SurgeonsMaxilo FacialPaediatriciansPaediatricians CardiotologyOGCardiac SurgeonCardiac General PhysicianNeuro SurgeonNeuro PhysicianUrology SurgeryUro-PhysicianSkin SpecialistOncologists SpecialistNuclear MedicineRehabilitation MedicineDental SurgeonNutritional ConsultantRheumatology Medicine
SELECT SPECIALITY Physician General Diabetes & Endocrinolog Consultant Physician Haematologist Chest Physician Chest Surgeons Liver Specialist Gi Specialist GI Surgeon CT, Ultrasound, X-Ray E.N.T Specialist Orthopaedic Surgeon Psychiatrist Pathologists General Surgeons Maxilo Facial Paediatricians Paediatricians Cardiotology OG Cardiac Surgeon Cardiac General Physician Neuro Surgeon Neuro Physician Urology Surgery Uro-Physician Skin Specialist Oncologists Specialist Nuclear Medicine Rehabilitation Medicine Dental Surgeon Nutritional Consultant Rheumatology Medicine
OSC Vaccination Center
အိုမီခရွန်ကို ကာကွယ်နိုင်ရန် လုပ်ဆောင်သင့်သည့် အရာများ
၁။ ကာကွယ်ဆေးထိုးပါ။ ၂။ Booster ထိုးနှံပါ။ ၃။ အပြင်သွားတိုင်း နှာခေါင်းစည်းတပ်ပါ။ ၄။ ခရီးမသွားခင် သို့မဟုတ် လူစုလူဝေးမလုပ်ခင် ကိုဗစ်ရှိမရှိ စစ်ဆေးပါ။ ကိုဗစ်၁၉ ကာကွယ်ဆေးများဟာ ကိုဗစ်ကာကွယ်ရန်၊ ကူးစက်မှုလျှော့ချရန်၊ ထွက်ပေါ်လာသည့် ...
#Covid မျိုးကွဲအသစ် Delta+Omicron= Deltacron???
အိုမီခရွန်ကတော့ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းမှာ အမြန်ဆုံးပြန့်နှံ့သွားပါတယ်။ ကာကွယ်ဆေးတွေကတော့ ရောဂါမပြင်းထန်အောင်နှင့် မသေဆုံးအောင် ကာကွယ်ပေးနေပေမဲ့ ရောဂါကူးစက်မှုကတော့ ရှိနေတုန်းပါပဲ။ တစ်ချို့သော မျိုးကွဲများက ပြန့်နှံ့နေပေမဲ့ တစ်ချို့မျိုးကွဲကတော့ ပေါ်ထွက်လာနေတုန်းပါပဲ။ ကိုဗစ်မျိုးကွဲတွေဟာ မူလဗိုင်းရပ်စ်ကနေ ကွဲပြားသွားတာက ကူးစက်နှုန်းနဲ့ ပြင်းထန်သည့် ရောဂါလက္ခဏာများ ဖြစ်ပါတယ်။ ဗိုင်းရပ်စ်ပြန့်လေလေ ...
အိုမီခရွန်မျိုးကွဲဟာ ဒယ်တာမျိုးကွဲလောက် မပြင်းထန်ဘူးလား???
တောင်အာဖရိကမှာ နိုဝင်ဘာလတုန်းက ပထမဆုံး မျိုးကွဲအသစ်တစ်ခုကို စတင်တွေ့ရှိချိန်မှာ လူတိုင်းက စိုးရိမ်ထိတ်လန့်သွားခဲ့ကြပါတယ်။ ကူးစက်မှုနှုန်းထားဟာ ဒယ်တာမျိုးကွဲလိုပဲ မြင့်မားကြောင်း သိရှိခဲ့ကြရပါတယ်။ အိုမီခရွန်ဟာ လက်ရှိကာကွယ်ဆေးတွေဖြင့် မကာကွယ်နိုင်လောက်မယ့် သန္ဓေပြောင်းလဲခြင်းတွေ ပါလာနိုင်မယ်လို့ သိပ္ပံပညာရှင်များက ခန့်မှန်းထားကြပါတယ်။ နောက်ဆုံးရရှိထားသည့် ...